Azonao atao ny manamboatra ny motera sambonao ary miverina amin'ny rano nefa tsy mandany vola be amin'ny mpivarotra an-dranomasina. | Fanamboarana fiara mpitondra sambo
Azonao atao ny manamboatra ny motera sambonao ary miverina amin'ny rano nefa tsy mandany vola be amin'ny mpivarotra an-dranomasina.
Ny tena tanjon'ity tranonkala ity dia ny hizara ny zavatra niainako ary hanolotra torohevitra sy tetika azo ampiasaina maimaim-poana hanamboarana motera sambo Evinrude sy Johnson taloha mba hahafahanao mahazo aina amin'ny fanaovan-javatra mitovy amin'izany. Ary koa, manome tantara momba ny fiavian'ireto motera ireto aho mba hahafantaranao bebe kokoa azy ireo. Raha manana iray amin'ireo motera any ivelany ianao izay resahiko ato amin'ireto "Projet Tune-Up" ireto, ary te-hanamboatra motera sambo Evinrude na Johnson taloha ianao hampandeha tsara azy, io no toerana ho anao. Na dia tsy soloina boky torolàlana momba ny serivisy aza ity tranokala ity, ireo pejy izay mamaritra ireo tetik'asa fanamafisam-peo ireo dia misy torolàlana tsikelikely ary koa ny sary izay mihoatra lavitra noho izay ho hitanao ao amin'ny boky torolàlana mahazatra. Rehefa mandeha ny fotoana dia manantena aho fa hanampy "Projet Tune-Up" bebe kokoa amin'ny lisitra etsy ambany. Ankasitrahana hatrany ny fanehoan-kevitra tsara, fa afaka mandray ny tsikera ihany koa aho.
Niova be ny zavatra tao anatin'ny 100+ taona lasa fa misy kosa ny zavatra mijanona tsy miova. Ny fitiavan'ny sambo, ny rano, eny ivelany, ary ny fofona sy ny feo izay hifaneraseran'ny olona hatrany amin'ny motera sambo ivelany. Izy ireo dia zavatra rehetra izay mitondra eritreritra mahafinaritra ao an-tsaintsika sy mifandray amin'ny fotoana mahafinaritra. Betsaka ny olona miantehitra amin'ny motera Evinrude hitondra azy ireo soa aman-tsara any an-trano, handosirana ny tafio-drivotra, hanomezana herinaratra ary rahoviana no ilaina izany na amin'ny asa lehibe na amin'ny tontolon'ny fialamboly iray manontolo. Noho ny zava-bitanao rehetra, misaotra anao Ole Evenrude. Enga anie ianao handry am-piadanana ary hahatsiaro anao hatrany.
Miarahaba an'i Ole Evinrude sy ny heviny, 100 + taona lasa izay, nanantona motera portable teny an-damosin'ny boatin-drano iray, ary nitondra fiara vaovao momba ny rano.
Please KITIHO ETO hanohy ny mpanoratra ny fampidirana.